अनुहार सुन्दर बनाउने चाहना भए व्युटी फुड्सको प्रयोग गर्नुस् - ज्ञानविज्ञान
प्राकृतिक रुपले स्वस्थ र सुन्दर नङ भए पनि अन्य विभिन्न कारणले गर्दा नङ बिग्रन सक्छ वा नङका विभिन्न समस्या देखा पर्न सक्छन् । साबुन, डिटर्जेन्ट, केमिकल आदिबाट नङमा रिएक्सन हुनसक्छ ।
कडा पानीको प्रयोग गरी काम गर्दा नङ कमजोर हुन्छ । भाँडा सफा गर्दा, लुगा धुँदा, सरसफाई गर्दा गरिने लापरवाहीले नङमा समस्या हुन सक्छ । त्यस्तै नङ टोक्ने, नङको प्रयोग गरी काम गर्ने बानी, कमसल र पुरानो कस्मेटिक सामानको प्रयोग आदि कारणले नङ कमजोर तथा अस्वस्थ हुन सक्छ ।
Don't Miss it दाँत सेतो र चम्किलो बनाउने घरेलु काइदा, जानिराखाैँ
Up Next महिलामा हुने डिम्बासयको क्यान्सर के हो ? यस्ता महिलालाई बढी पाठेघरको क्यान्सर हुन्छ – यसबाट कसरी बच्ने ?
जीवनको आयु तपाईंकै हातमा
वैज्ञानिकहरूले गरेको एक सर्वेक्षणले मानिसले अवलम्बन गर्ने जीवनशैलीले आयुमा भारी तलमाथि पार्ने देखाएको छ । ६५–७० वर्षको जुनकुनै व्यक्तिले नियमित…
यस्ता छन्, केराको बोक्राको फाइदाहरु
१. चाउरी पर्नबाट बचाउँछ : केराको बोक्रा अनुहारको लागि एक दमै लाभदायी हुन्छ| केराको बोक्रामा एंटी ओक्सिडेन्ट हुन्छ जसले अनुहारमा…